ကွေးနနျးစာ | October 2019
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ installation ကြေးနန်း
အဆိုပါလူကြိုက်များ instant messenger ကြေးနန်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကို Android နှင့် iOS နှင့်အတူမိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်, ဒါပေမယ့်လည်း Windows ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မသာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးအတွက်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်သည့်နည်းလမ်းများစွာအတွက်သင့်ရဲ့ PC မှာအပြည့်အဝ-featured program ကို install လုပ်ပါ။ တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာကြေးနန်း install လုပ်သင့် PC မှကောင်းကင်တမန်၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိ installation ကိုသာ options နှစ်ခုရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကို Windows, Android အတွက်အဆိုပါကြေးနန်း, ကို iOS အတွက်လိုင်းများမှ subscribe
ကြေးနန်းတက်ကြွအသုံးပြုသူများသည်ကဆက်သွယ်ဖို့ဒါပေမယ့်လည်းအများအပြားအကြောင်းအရာအလိုက် channel များကိုတလှည့်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်သည့်အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ်ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းအချက်အလက်, လောင်ဖို့သာသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကောင်းစွာသတိပြုမိကြသည်။ ဒီလူကြိုက်များ messenger ကိုသင်ယူဖို့စတင်နေကြသည်သူများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကို, မ၎င်းတို့၏ရှာဖွေရေး algorithm ကို, ဒါမှမဟုတ်ကြေးပေးသွင်း၏လမ်းကြောင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိရပေမည်။
လျှင်မြန်စွာကမ္ဘာတဝှမ်းနှင့်ကြေးနန်း, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအသုံးဝင်သောနှင့်ပင်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိထူးခြားတဲ့ features တွေအများကြီးက၎င်း၏အသုံးပြုသူကမ်းလှမ်းတစ်ဦးချင်းစီ messenger ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်တစ်ချိန်တည်းမှာပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ device ကိုမှတမန်ကို client application ကို setting - တစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုစနစ်၏အားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှုအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း။
ရှာရန်လိုင်းများကို Windows, Android, iOS အပေါ်ကြေးနန်း
အဆိုပါလူကြိုက်များ instant messenger ကြေးနန်းယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်စာသား, အသံဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်သူတို့ကိုအမျိုးမျိုးသောရင်းမြစ်များမှသတင်းအချက်အလက်များဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရုံအသုံးဝင်သောခွင့်ပြုမသာ။ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး၏စားသုံးမှုဤလျှောက်လွှာ၌ရှိကြ၏သောလမ်းကြောင်းများထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်မည်သူမဆို, ယေဘုယျအားဖြင့်, ကအတော်လေးလူသိများစေခြင်းငှါ, ဒီလယ်ပြင်၌ edition မှာ၏ကျော်ကြားမှုအတွက်အရှိန်အဟုန်အဖြစ်အကြွင်းမဲ့အာဏာအရင်ကဆိုရင်ရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်စေနိုင်သည်။
ကို Windows, Android, iOS ပေါ်တွင်ကြေးနန်းချန်နယ်တစ်ခု Create
ကြေးနန်း - ကဖွင့်စာသားနဲ့အသံဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက် app ကို, ဒါပေမယ့်လည်းလိုင်းများအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်ဖြန့်ဝေသောအမျိုးမျိုးသောအချက်အလက်များ၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းကင်တမန်၏တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများကိုဤမှန်ကန်စွာမီဒီယာများ၏ပုံစံကိုခေါ်နိုင်ထားတဲ့ element ဖြစ်ပါတယ်, အချို့ပင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာအရင်းအမြစ်ဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲစဉ်းစားကြောင်းကောင်းစွာသတိပြုမိကြသည်။
Android, iOS, Window ပေါ်တွင်ကြေးနန်းထဲမှာပရိုဖိုင်းကိုမှမိတ္တူလင့်များ
အများဆုံးလက်ငင်းတမန်တို့ကိုမတူဘဲ, ကြေးနန်းများတွင်အသုံးပြုသူ ID ကိုသူ့ဖုန်းမှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်အသုံးပြုအရေအတွက်က, ဒါပေမယ့်လည်းပရိုဖိုင်းကိုမှ link တစ်ခုအဖြစ်ကိုလည်းလျှောက်လွှာအတွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့်ထူးခြားတဲ့အမည်ဖြင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်များစွာသောလူထုလိုင်းများနှင့်ချက်တင်ခန်းတစ်ဦးဂန္ URL ကို-လိပ်စာများ၏ပုံစံအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လင့်များရှိသည်။
Android, iOS နဲ့ Windows များအတွက်ကြေးနန်းထဲမှာအုပ်စုတစ်ခုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦးချက်တင်ခန်းထဲမှာမျိုးစုံကြေးနန်းဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းသားများအကြားအချက်အလက်, ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, အုပ်စုများအတွက်ဆက်သွယ်ရေးအိတ်ချိန်း - လူများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ဆက်သွယ်ရေးလုံလုံခြုံခြုံနဲ့အဆင်ပြေရုပ်သံလိုင်းများကိုတို့သည်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ် messenger ကိုအဖှဲ့အစညျး၏ကျန်လိုပဲသူတို့ကိုအတွင်းထိုကဲ့သို့သောမူရင်းအသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်ဒေတာ transfer ဖောက်သည်တစ်ဦးမြင့်မားသောအဆင့်မှာ, လျှောက်လွှာ developer များကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။
PC များနှင့်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင် messenger ကိုကြေးနန်းကိုဖယ်ရှားခြင်း
အဆိုပါလူကြိုက်များနှင့်စွယ်စုံကြေးနန်း app ကိုဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းစားသုံးသူများအတွက်သာမကအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးက၎င်း၏အသုံးပြုသူပရိသတ်ကိုလုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းကမ်းလှမ်း - ထို banal ထံမှမှတ်စုနှင့်သတင်းအသံနှင့်ဗီဒီယိုရန်။ ဤအခြင်းနှင့်အခြားအားသာချက်များနေသော်လည်းအချို့ကိစ္စများတွင်ပြုလုပ်ဆဲလျှောက်လွှာဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
Android, iOS နဲ့ Windows များအတွက်ကြေးနန်းထဲမှာချက်တင် Creating
ခေတ်သစ်သံတမန်တို့ကိုအသံနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများပွညျ့စုံအပါအဝင်ဖြစ်နိုင်ခြေ, အများကြီးသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများကိုဆက်ကပ်။ သို့သော်အများဆုံး application များကအင်တာနက်ကိုကျော်ဆက်သွယ်ဖို့စဉ်ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အမျိုးမျိုးသောဂျအတွက်ချက်တင်ခန်း၏ပုံကိုဖန်တီး, သင့်အာရုံကိုရန်ဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့လူကြိုက်များဝန်ဆောင်မှု၏အခြားသင်တန်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်တစ်ဦးအမြင်အတူ client ကိုလျှောက်လွှာကြေးနန်းသင်ယူရန်။
နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကြေးနန်း update ကို
အခုတော့ကွန်ပျူတာများနှင့်မိုဘိုင်း device များအတွက်တမန်တို့ကိုရရှိမှုလူကြိုက်များကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲ၏အကျော်ကြားဆုံးကိုယ်စားလှယ်များတစ်ခုမှာကြေးနန်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် program ကိုအဆက်မပြတ်အသေးစား bug တွေကိုဆုံးနှင့်အသစ် features တွေ add developer ကထောက်ခံသည်။ တီထွင်မှုကိုစတင်သုံးစွဲဖို့, သင် update ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အန်းဒရွိုက်စက်ကိရိယာများပေါ်တွင် installation ကြေးနန်း app ကို
အဆိုပါလူကြိုက်များ instant messenger ကြေးနန်းကယခုသည်အသုံးပြုသူများအကြား ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည်, လူမှုကွန်ယက် VKontakte Pavel Durov ၏ဖန်တီးသူဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ ဒီ application ကို Windows နှင့် MacOS ပေါ်တွင်နှင့် iOS နှင့် Android running မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင် desktop ပေါ်ကအဘို့အဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရုံအစိမ်းရောင်စက်ရုပ်နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းအပေါ်ကြေးနန်းကို install အကြောင်းကိုဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
ကြေးနန်း, အခြားမည်သည့် instant messenger ကဲ့သို့ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည် text messages နှင့် voice ဖုန်းခေါ်မှတဆင့်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ယင်းကိုထောက်ပံ့သည့်ကိရိယာ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်, ယင်းခွင့်ပြုချက်အရာအားဖြင့် - အားလုံးသင်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့မူကား, input ကိုမှဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလိုခငျြတယျဆိုရငျ - ထိုကြေးနန်းထဲကရဖို့။
Android နှင့် iOS နှင့်အတူကိရိယာများပေါ်တွင် installation ကြေးနန်း
အဆိုပါလူကြိုက်များ instant messenger ကြေးနန်း Pavel Durov ဒီဇိုင်း, ပလက်ဖောင်းအားလုံးပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်ရရှိနိုင်ပါသည် - နှစ်ဦးစလုံး desktop ပေါ်မှာ (Windows MacOS, Linux,), နှင့်မိုဘိုင်း (Android နဲ့ iOS ကို) ပေါ်မှာ။ ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာအသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းနေသော်လည်းများစွာသောနေဆဲတပ်ဆင်ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး, ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာကျနော်တို့နှစ်ခုလူကြိုက်အများဆုံးလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုအပြေးဖုန်းများပေါ်တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
မိတ်ဆွေများက Android, iOS, Windows အတွက်ကြေးနန်းထည့်သွင်းခြင်း
ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူရေးကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းတင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများအများစု၏ရှေ့မှောက်တွင်၏မရှိခြင်းအတွက်, အနတ္တဖြစ်လာကြောင့်အဆက်အသွယ်စာရင်း, မည်သည့်ကောင်းကင်တမန်၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးယနေ့အများဆုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့စိတ်ချလိုင်းများတစျဦး၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသေချာစေရန်, ထိုကြေးနန်းမှမိတ်ဆွေများကို add ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
https://termotools.com my.termotools.com © ကွေးနနျးစာ 2019